GlobalNet | Communication asaService (Amazon Chime)
Communication asaService (Amazon Chime)
ယခုလိုကာလအတွင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် အချင်းချင်းချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုများ၊ online business call များ၊ online meeting communication များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာမှာ security ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် cost saving အတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပါသလား?….
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ business communication ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် security အပြည့်အဝပေးနိုင်ပြီး Pay As You Go payment system ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Amazon Chime single application service ကို AWS မှ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ….
Amazon Chime သည် business meeting များ၊ video conferencing၊ Team Collaboration & Chatting အစရှိသည့် service များအပြင် လူဦးရေ (250) အထိတက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ Presentation sharing များကိုပါ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်…
Global Technology Company မှ Amazon ၏ official partner အဖြစ် Amazon Chime (online communication application service) ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး local engineering team အနေနဲ့ AWS certified engineer များမှဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်….
Construction, Housing and Infrastructure...
Tag Line: Construction, Housing & ...
Zoom All Solutions
Global Technology (GlobalNet) သည် ...